Mmetụta nke Marketingdị Mgbasa Ntanetị Dijitalụ na Creditgwọ Ebe E Si Nweta na Financiallọ Ọrụ Ego | Martech Zone
Onye otu Mark Schaefer bipụtara na nso nso a, 10 Epic mgbanwe na-Re-Writing Iwu nke Azụmaahịa, na a ga-agụ. Ọ jụrụ ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ niile ka ahịa si agbanwe n'ụzọ miri emi. Otu mpaghara m na-ahụ ọtụtụ ọrụ na ya bụ ikike iji hazie mmekọrịta na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa. Ekwuru m:
Usoro data a nwere ike ịpụta “ọnwụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na ịrị elu nke ezubere iche, ahụmịhe azụmaahịa ahaziri iche site na ABM na ngwaọrụ ndị yiri ya. Anyị ga-ahụ ndị KPI dabere na ahụmịhe na ahụmịhe nchịkọta karịrị echiche dị mfe na afọ ojuju ndị ahịa. ”
Ebe ọ bụla ị na-ele ahịa, algọridim, akpaaka, ọgụgụ isi, bots na teknụzụ ọ bụla ọzọ ka etinyere iji dozie otu nsogbu. Ndị ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ iji soro atụmanya ha na ndị ahịa na ọkwa nke onwe ha, na-enye ahụmịhe pụrụ iche. Ọ bụ ezie na anyị enweghị akụrụngwa iji soro onye ọ bụla na-emekọrịta ihe, teknụzụ na-amalite ịmalite ihe ga-eme ka nke a nwee ike.
MDG bipụtara infographic a maka Credit Union Industry, 5 Creditdị Marketingzụ ahịa E Si Nweta Ebe E Si Nweta. Ọ bụ ezie na etinyere ozi ahụ maka ndị ọrụ kredit, ụlọ ọrụ niile kwesịrị ị paya ntị:
Nkata Ga Bata N’inweta Mgbakwunye Njikọ Aka - Ruo ọtụtụ afọ, ndị ọrụ kredit chere na nkata n'ịntanetị dị ka onyinye dị mma. Na 2017, nke ahụ nwere ike gbanwee ka ndị ahịa na-ele ọrụ nkata anya dị ka ihe achọrọ. 24% nke Millennials na-ekwu na ha agaghị eji ụlọ ọrụ ego na-anaghị enye atụmatụ nkata n'ịntanetị
Ekekọrịta Email Campaign Ga-ewepụta Mmetụta Nsonaazụ - Email abụrụla ebe ọrụ ahịa dijitalụ dijitalụ, ma n'ụzọ ziri ezi. Usoro ahụ na-aga n'ihu na-enyefe aka na ọnụ ala dị ala maka ndị na-ere ahịa n'ofe niile. Ejiri mkpọsa ozi email nwere 94% ọnụọgụ dị elu na 15% ọnụego mmeghe dị elu
Atụmatụ SEO ga-abụ Usoro Ọdịnaya - Cheta mgbe njikarịcha nchọta ihe gbasara ihe nzuzo zoro ezo na ụzọ aghụghọ dị mgbagwoju anya? Thosebọchị ndị ahụ agwụla. Ka otu njikọ kredit gị wee nwee ọkwa dị mma na nsonaazụ ọchụchọ, ọ dị mkpa iji zụlite onyinye weebụ nke ndị mmadụ chọrọ itinye aka na nke nwere ike ịkekọrịta.
Netwọk mmekọrịta ga - abụ (Netị) Netwọk Mgbasa Ozi - Netwọk mmekọrịta na-aga n'ihu site na saịtị ntinye aka n'efu maka ndị na-ere ahịa ịkwụ ụgwọ nyiwe na-egwu. Ha bụ akụkụ dị mkpa nke mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla. 74% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ha na-emefu ego na mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na Global na-emefu na mgbasa ozi mgbasa ozi na-ebu amụma ịbawanye site na 26.3% na 2017
Ihe omume ga-adị mkpa karịa mgbe ọ bụla maka itinye aka - Ijide / ịga ihe omume nwere ike ịbụ usoro ịzụ ahịa ụlọ akwụkwọ kacha ochie. Agbanyeghị, ogologo akụkọ ihe mere eme ahụ emeghị ka ọ ghara ịdị irè. 67% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ihe omume ndị mmadụ ka bụ ụzọ aghụghọ ahịa dị irè
Mgbe anyị bụ ụlọ ọrụ dijitalụ ebe a na Indianapolis, ọbụlagodi anyị na-ebupụta usoro ihe omume mpaghara iji nyere ndị ahịa anyị aka ịmatakwu ndị nwere ikike na ndị nwere ike ịre ahịa. Ahịa ahịa ahịa na-enye ohere dị ịtụnanya, mana ekwesighi iji ya dochie anya obi ụtọ na ahụmịhe nke omume mmadụ ma ọ bụ nzukọ!
Tags: content Marketingnjikọ n'akaahia otu ahiaEbe ahia ahia ahiacreditzọ nkwanye ụgwọemail emeghe ọnụegoemail nkewammemme ahiaiheegoego chatụlọ ọrụ egoamụmaMillennialssearch engine njikarịchankewaAmgbasa ozi na-elekọta mmadụmgbasa ozi mgbasa ozinetwọk mmekọrịta